Imifanekiso ye-Instagram onokuthi uyiphose | Abadali be-Intanethi
Instagram Illustrators Awunakuphoswa
Iris Gamen | 03/04/2022 23:00 | Abadlali
Bangaphi kuthi abachithe iiyure ezininzi kwi-Instagram, bejonga iiprojekthi zemifanekiso eyahlukeneyo. Hayi nje njengendlela yokuphefumlela, kodwa ngenxa yokuba unokufumana imisebenzi emangalisayo kunye nabazobi kwi-Instagram ekusenokwenzeka ukuba ubungayazi.
Inethiwekhi yentlalo, ibe ngumboniso omkhulu apho amagcisa ahlukeneyo abonisa igalari enkulu yemisebenzi yabo. Kule meko, ababonisi banomdla kubasebenzisi ngemizobo eyenziwe ngeendlela ezahlukeneyo ezifana nepensile, iziphawuli, isitshizi okanye idijithali.
1 Imifanekiso ye-Instagram ofanele uyilandele
1.1 UNuria Diaz
1.2 UJennifer Prince
1.3 Sanz kunye Vila
1.7 UMarta Altes
1.9 ispaghetti silo
1.11 UJoseph A. Roda
1.12 UChris Amandla
Imifanekiso ye-Instagram ofanele uyilandele
Kuzo zonke iinethiwekhi zentlalo, I-Instagram izele ngabantu abanetalente emangalisayo. Ungafumana naluphi na uhlobo lweprojekthi elayishwe kwiiprofayile zabo, ividiyo, umzekeliso, ukufota, njl. Kwaye yile nto siza kuthetha ngayo ngokulandelayo, malunga nemifanekiso ye-Instagram omele ukuba uyazi.
Kwimeko yelizwe, sigxininisa umzobo womzobi uNuria Diaz, onobuntu bomntu emsebenzini wakhe. Imizekeliso kule nto umzobi unesitayile esingenangqondo nesilula, ukongeza kusetyenziso lwemibala enomtsalane.
Ubaleka iintsingiselo ezimbini kwimizekeliso yakhe. Ngemisebenzi yakhe, ufuna ubugcisa ngokusetyenziswa kwezinto ezimbalwa zegraphic. Uyilo lwalo lukhumbuza ezo zangaphambili, kuba zinenkalo yendabuko ekhokelela ekubeni ikhuphe imvakalelo yokufudumala.
Umzobi waseBrazil, esiya kuye ngemifanekiso yakhe yakudala ukuya kwixesha le-50s.. Ziyimisebenzi kunye nesitayile se-comic yakudala apho athetha malunga nobufazi, imiba yoqhanqalazo kunye ne-queer.
Kumsebenzi wakhe sinokubona indlela uJennifer, ibonisa imiboniso kwisimo sengqondo sothando nangezihlandlo zobuqu. Ukwenza oku, usebenzisa imibala eqaqambileyo ukongeza kwimigca emnyama yasentsomini yee-comics.
Sanz kunye Vila
Ukubuyela kwipanorama yaseSpain, sifumana umzobi ovela eAlicante, ePau. Yakhe isitayile, sibonwa ekuqaleni ngokusetyenziswa kwemibala enje ngepinki, tyheli kunye nebhlowu.
Ngombulelo kwindlela yakhe, uye wakwazi ukusebenzisana neempawu ezivela kuwo onke amacandelo, ukusuka kwiziselo ezinxilisayo ezifana neBeefeter ukuya kwiimpawu ezifana neGreenpace.
Igcisa elizalelwe kwaye lakhulela eHong Kong. Enkosi kweyakho Imizobo kwiicomics ezinesitayile esilolo hlobo imkhokelele ekubeni abe ligcisa lereferensi kulo mmandla.
Phakathi kwemisebenzi yakhe, unokufumana imixholo eyahlukeneyo efana nemanga yaseJapan, inkcubeko yaseHong Kong, imixholo yabasetyhini, phakathi kwabanye.
Ukusuka eTexas, eUnited States, sinazisa koku Umzobi osebenzisa umbala kunye nokwakheka kumsebenzi wakhe njengaye nawuphi na omnye umntu.
Kwimizobo yakhe, imvelaphi yoyilo kunye nejometri inokubonwa, yenziwe ngokwakheka okuguquguqukayo kakhulu. Indlela amele ngayo iimpahla, amalaphu kunye nezinto iyamangalisa.
Umzobo awunakubanjwa kuphela ephepheni okanye kwizikrini, unokuvela nakwiipleyiti ze-porcelain. I-Artefacto, i-duo yase-Argentina enestudiyo sayo eMadrid Baza kukuphambanisa ngoyilo lwabo kwitafile yetafile.
Imisebenzi yakhe, inokuwela iindlela ezahlukeneyo zokuzoba eziya kuthi kamva zibonakaliswe kwizinto ze-porcelain, ngomoya we-surreal kunye nokugqiba okukhulu.
Waqala umsebenzi wakhe kwihlabathi loyilo lwegraphic, kodwa olo lwalamano aluzange lwenzeke kuba eyona nto yayinomdla kuye yayingumzekeliso.
Ngemizekeliso yakhe, igcisa lifuna ukunika umbono owakhayo nomnandi wobomi esijongene nabo, yaye ngaloo ndlela uzuza uncumo.
Sithetha ngayo enye yeengcali zehlabathi kuphuhliso lwemizekeliso. Kwizithuba zakhe ze-Instagram, usibonisa inyathelo ngenyathelo lokudala omnye wabalinganiswa bakhe.
Phantse ngabalandeli abangamawaka angama-230 kwi-Instagram, iakhawunti ye-Spaghetti Monster ngopapasho lwabo, basinika imisebenzi ethi kwezinye iimeko ixube imiyalezo yoluntu kunye noburharha.
Ziyimifanekiso yesitayela esincinci, esinemizobo elula kakhulu, itekisi eninzi ngezinye izihlandlo kunye nobuntu obukhethekileyo.
Ngomsebenzi ochukumisayo, sinikezela kuwe igcisa laseTshayina elinetalente uSuzume Saki. Ngemisebenzi yakhe, sinokuqaphela iireferensi kwiindlela ezahlukeneyo ezifana nehlabathi le-cyberpunk.
yakhe imifanekiso enomlinganiswa ndlongo, ephawulekayo kumaqela kunye nokuma kwabalinganiswa abadaliweyo. Ukongeza, imibala isebenza njengendlela yokubonisa ukuba ndlongondlongo, obo buntu.
UJoseph A. Roda
Ngokuqinisekileyo abaninzi benu bayawazi lo mculi, ekubeni usebenzisane nenethiwekhi yoluntu ye-Instagram ukuyila izincamathelisi zokuzingca ukongeza kumabali abo. Ukongeza, enye iprojekthi eyaziwayo yayiyi-mural awayenzayo kwiMarike kaMasipala waseBarceló, kwindawo yaseMadrid.
Ungumzobi apho umsebenzi wakhe unokuba yimizekeliso yemifanekiso emicaba, imigca, enomoya wobufazi kunye nombala omninzi.
Umyili womxholo osebenzele iibrendi ezahlukeneyo zamazwe ngamazwe, njengeNetflix okanye iDisney, phakathi kwabanye.
Kwiprofayile yakho ye-Instagram masibone imisebenzi yakhe ecaciswe ngobuchule obumangalisayo, isimbo esinemibala kwaye ukuba nayo yonke le nto, basikhumbuza ngehlabathi leDisney.
Abazalwana ababini ababonisa ubuchule kunye noburharha kuyo yonke indawo kwimisebenzi yabo. Kwimizekeliso yabo, basebenzela ekubeni nethemba ukusukela oko baqala ukuzoba njengabantwana de bavula esabo studio eBarcelona.
Abahlalanga nje kwihlabathi lemizekeliso, kodwa kwakhona Basebenze kunye neempawu ezinkulu kwaye bajongene neeprojekthi ezivela kwezinye iindawo zobugcisa, ezifana nemifanekiso eqingqiweyo.
Okokugqibela kodwa kuncinci, sikuzisa umculi uLoish. Mhlawumbi abaninzi benu baya kumlandela kwiintanethi zentlalo, ekubeni Unabalandeli abangaphezu kwezigidi ezi-2 kwiprofayile yakhe.
Ukuba uthanda ihlabathi lomfanekiso, Imisebenzi kaLoish iyamangalisa nje. Kwindalo yakhe emangalisayo, amanani amabhinqa amancinci abonakala ejongene neemeko ezahlukeneyo. Ngamabali akhe, umyili ubonisa indlela aphuhlisa ngayo iindawo ezithile zoyilo.
Ayimangalisi into yokuba olu qulunqo lwemifanekiso ye-Instagram ikwazi kancinci. Siyathemba ukuba bayakukhuthaza okanye bachithe iiyure nje besonwabela indalo yabo emangalisayo. Ukuba uyazi ngayo nayiphi na imizobo ekufuneka siyazi ngayo, zive ukhululekile ukuyibhala kwibhokisi yezimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Instagram Illustrators Awunakuphoswa
Imizekelo yeelogo zenkampani yokwakha ukuze ikukhuthaze